8-da isbeddel ee jirakaaga ku dhaca 30 sano markaad ka kormartid
Home Maskax-fur 8-da isbeddel ee jirakaaga ku dhaca 30 sano markaad dhaaftid
Da’da qofka markay ay ka kormarto 30 sano, waxaa bilaabma isbeddello dabiici ah oo ku dhaca qaybo kala duwan ee jirka bani’aadamka. Waxaan halkaan kusoo qaadanaynaa qaar ka mid ah isbeddeladaas, waxaa laga yaabaa in ay kugu noqdaan lama filaan ama ay noqdaan kuwa aad horay isugu aragtay haddii ay da’daadu ka sarrayso 30 sano.
Waxaa yaraada maskaxdaada
Maya, maskaxdaada da’da lama korto, xaqiiqdii waxaa dhaca kasoo horjeedkeeda. Marka aad noqotid qof da’ ah, qaybo ka mid ah maskaxdaada ayaa yaraada. Waxay qiyaas ahaan lumisaa 50 kun oo neerfo (neurons) maalinkii wixii ka dambeeya da’da 30 ka. Balse haka walaacin arintaas, maskaxda ayaa taqaana sidii ay ula qabsan leheed isbeddel walba oo ku yimaada.
Waxaa kale oo la ogaaday in maskaxda uu cadadkeedu yaraado boqokiiba shan 10kii sannaba da’da 40 ka kadib. Isbeddeladan ayaa saameeya xusuusta qofka, siiba xusuusaha dhaadheer.
Waxaa yaraada dhididka
Qofka marka da’diisu ka kormarto 30 ka ayaa isbeddelada jirkiisa sameeya ka mid yihiin in ay yaraato xasaasiyada qanjirada dhididka soo daaya, sidaa darteedna da’ba da’da kasii saraysa ayaa waxay sababtaa in xasaasiyada qanjiradaas ay sii yaraato taas oo keenta dhididka oo qofka ka yaraada.
Waxaa hoos u dhaca dareenka dhadhanka
Inta ay da’daada kordheyso, waxaa hoos u dhac ku yimaada dareenkaga dhadhanka, dadka qaar ee da’dooda ka saraysa 60 sano ayaa gabi ahaanba lumiya dareemahooda dhadhanka taas ayaana u sabab ah dadka qaar ee da’da ah in ay cuntada ku darsadaan sonkor badan ama cusbo badan. Waxaa si lamid ah u yaraada dareenka urta.
Waxaa hoos isu dhima murqaha
Qiyaas ahaan boqolkiiba 3% ilaa 8% ayay cilmi baarayaasha sheegaan in murqaha jirka ay is dhimaan tobbankii sanaba wixii ka dambeeya da’da 30 ka. 60 sano kadibna wuu sii bataa sidaas ayaana keenta in qofka marka uu da’ noqdo uu tabar yareeyo maadaama murqaha jirka siiya awooda ay si dabiici ah hoos ugu dhacaan.
Waxaa xasila dheef-shiidka
Cilmi baarayaasha ayaa soo jeediyay in dheef-shiidka jirka uu marxalado kala duwan maro qofka inta uu yaryahay taas ayaana sabab u ah in qofka marna uu ka yaraado miisaanka oo uu dhuubto marna uu miisaankiisa kor u koco, balse qofka marka uu da’ noqdo ayaa waxaa u xasila dheef-shiidka. Xasilaadaas ayaa sabab u ah in dadka da’da ah uu miisaankooda ku ekaado hal meel.
Waxaa xasila shaqsiyada qofka
Qofka marka ay da’diisu soo gaarto 30 sano, waxaa xasila shaqsiyada qofka, waxaa uu bartaa qofka uu yahay, waxaa u kala cadaada dabeecadaha, waxaa uu qofka gartaa hamiga uu ka leeyahay nolosha, waxaa uu ka fikiraa nolosha uu naftiisa u rabo, wuxuu iska yareeyaa khilaafka badan, wuxuu mar walba door bidaa nabad iyo xasilooni.
Cidiyaha ayaa gaabiya wakhtiga ay ku koraan
Diktoor William Bean ayaa ahaa qofkii ugu horeeyay ee ogaada in wakhtiga ay cidiyaha kusoo baxaan ama ku koraan ay is beddel sameeyaan qofka marka ay da’diisa korodho kadib markii uu cabiray cidida suulkiisa bidix oo qaadatay 0.123 mm maalinkii intii uu dhalinyarada ahaa. Wuxuu sidoo kale cabiray wakhtiga ay kusoo baxaan markii ay da’diisu ahayd 67 sano jir, taas oo noqotay in maalinkii ay qaataan 0.095 mm. Isbeddeladan ayaa laga yaabaa in ay sababeen wareegga dhiigga oo daciifay.
Xasaasiyada ilkaha oo yaraata
Qofka marka ay da’diisu dhaafto 30 sano, waxaa bilaawda in ilakaha ay joojiyaan xasaasiyada. Soomaali badan ayaa qabta xasaasiyada ilkaha taas oo dhib u keenta marka ay isku dayaan in ay cunaan waxyaalaha qaar sida mac macaanka ama wixii dhanaan. Balse, dadka ka wayn 30 ka sano ayaa ka yaraata xasaasiyada ilkaha sababtuna waxay tahay, neerfaha ilkaha iyo lafta samaysa iligga ayaa si dabiici ah u adkaada waxayna hoos u dhigaan xasaasiyada ilkaha.
Previous articleAsalka Soomaalidu ma faraaciinbaa? (Dadkii fircoon uu kasoo jeeday) Q 2aad
Next article7 Waxyaabood waligaa haku samaynin Baraha Bulshada